Driver Magician 3.90 FinaL - FULL - .::just for share::.
Home » Driver » Driver Magician 3.90 FinaL - FULL
Driver Magician 3.90 FinaL - FULL
ကွန်ပြူတာကို Window အသစ်တင်ပြီး Driver လိုအပ်နေသူများအတွက် Driver Magician v3.9 ကိုတင်ပေး လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေးရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ ရှိထားပြီးသား Driver တွေကို Backup လုပ်ပေး နိုင်ပါတယ် ၊ Backup လုပ်ထားတဲ့ Driver တွေကို ပြန်ပြီး Restore လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်
၊ ဒါ့အပြင် ရှိထားပြီး သား Driver တွေကို Update လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ မလိုချင်တဲ့ Driver တွေကိုလည်း Uninstall လုပ်ပေးနိုင် ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ Driver တွေကို Install လုပ်ဖို့နဲ့ Update လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ အင်တာနက်ကွန်နရှင် ရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းသုံးနိုင်အောင်လည်း Full Version အဖြစ် Keygen ထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။
Windows© 98/ME/2000/XP/Server 2003/Vista/7/8/8.1, 32 bit and 64 bit
Changes in Driver Magician 3.90 July 29th, 2013:
Download Driver Magician 3.90 FinaL - FULL